A Chọkwuru Ndị Ozi Ọma | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
Isiokwu Afọ 2015
Ọrụ Na-aga n’Ihu n’Ihu na Wọwik
Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Ụwa Niile
Baịbụl E Bipụtara ma Kwee Ka Ọ Ghara Imebi Ngwa Ngwa
Nnọkọ Kacha Buo Ibu Ndịàmà Jehova Nwetụrụla
E Nyefere Jehova Alaka Ụlọ Ọrụ Anyị Dị na Sri Lanka
Ikpe Gbasara Ndịàmà Jehova
“Anyị Ahụwo Ihe Ọhụrụ”
Ihe Ndị Ị Ga-eburu n’Uche Gbasara Dọminikan Ripọblik
Ihe A Chọtara
“Anyị Ga-amata Ndị Ha Bụ”
A Tụrụ Ha Mkpọrọ, Machiekwa Ha
Ha Akwụsịghị Ikwusa Ozi Ọma
A Hapụrụ Ha, Mechaakwa Machie Ha
Ije Chọọchị Katọlik na Trujillo
E Mesiri Ha Ike
Ònye Bụ Onyeisi?
E Nwere Ike Ijide Ha
Obi Ha Tachiri Mere Ka Ha Nwere Onwe Ha
“Ụjọ Atụghị M Izi Ndị Mmadụ Ozi Ọma”
“M Ma na Alaeze Chineke Ga-abịarịrị”
“O Nweghị Ihe Ga-eme Ka M Kwụsị Ịbụ Onyeàmà Jehova”
A Hapụrụ Ha Ka Ha Kwusawa Ozi Ọma
A Chọkwuru Ndị Ozi Ọma
Ha Hụrụ Ụmụnna Ha n’Anya
Ihe E Mere Mgbe Ọtụtụ Ndị Batawara n’Ọgbakọ
Ndị Na-asụ Asụsụ Heshan Kriol
Mgbe Ala Ọma Jijiji Mere na Heiti
Ihe Ndị A Na-atụ Anya Ga-eme n’Ọdịnihu
Jehova Emeela Ka Ọtụtụ Ndị Bata n’Ọgbakọ
“Mmadụ Iri Abụọ na Abụọ Hapụrụ Chọọchị”
M Bụbu Onye Agha Nnupụisi Na-ekweghị na Chineke, Mechaa Fewe Chineke
Onye Ogbi Mbụ Batara n’Ọgbakọ
Ọ Chọpụtara Ihe Ga-abara Ya Uru ná Ndụ
Achọburu M Ịkwụsị Ife Chineke
Ihe Ndị Mere n’Otu Narị Afọ Gara Aga, Ya Bụ, n’Afọ 1915
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2015
E Kwusaruru Ozi Ọma n’Ime Ime Obodo
Ka oge na-aga, e si Bolivia zitekwuo ndị ozi ala ọzọ. Ụfọdụ n’ime ha bụ Nwanna Pete Paschal, Nwanna Amos Parker na nwunye ya Barbara nakwa Nwanna Richard Stoddard na nwunye ya Belva. E sikwa Kolombia zite Nwanna Jesse Cantwell na nwunye ya Lynn. Ha mere ka ozi ọma biri ọkụ na Dọminikan Ripọblik. Ka ọ na-erula afọ 1973, ụmụnna anyị eziela ozi ọma n’ọtụtụ obodo ndị mepere emepe. Ma, e zirubeghị ya n’ime ime obodo. N’ihi ya, a haziri ka a gaa zie ndị bi n’ime ime obodo ozi ọma. Mgbe a gwara ụmụnna anyị ka ha wepụta onwe ha gaa ebe ahụ zie ozi ọma ọnwa abụọ, ndị ọsụ ụzọ oge niile dị iri na itoolu gara. N’agbata ọnwa Disemba afọ 1973 na ọnwa Jenụwarị afọ 1977, e zipụrụ ụfọdụ ndị ọsụ ụzọ ka ha gaa zie ozi ọma n’ebe ndị a na-ezitụbeghị ozi ọma ma ọ bụ n’ebe e zitụrụla ozi ọma.
‘Ọ na-abụ anyị nye ndị mmadụ akwụkwọ, ha enye anyị ọkụkọ ma ọ bụ àkwá ma ọ bụ mkpụrụ osisi’
Otu onye ọsụ ụzọ so gaa ebe ndị ahụ sịrị: “Ọ na-abụ anyị zie ndị ebe ahụ ozi ọma taa nye ha akwụkwọ, echi anyị agaghachi na nke ndị nwere mmasị mụọrọ ha Baịbụl. Ebe ọ bụ na ndị bi ebe ahụ enweghị ego, anyị nye ha akwụkwọ, ha enye anyị ọkụkọ ma ọ bụ àkwá ma ọ bụ mkpụrụ osisi. Anyị na-ekele Jehova n’ihi na o nweghị mgbe o kwere ka anyị gbara ọnụ.” Baịbụl ụmụnna anyị gụụrụ ndị ebe ahụ bụ nke mbụ ọtụtụ n’ime ha na-anụ ihe si na Baịbụl. Mgbe ụfọdụ, ndị ụkọchukwu na-agwadị ha na ọ bụ Jehova bụ Ekwensu. O juru ha anya mgbe a gụụrụ ha Abụ Ọma 83:18. Ebe ahụ sịrị: “Onye aha gị bụ Jehova, ọ bụ naanị gị bụ Onye Kasị Elu n’ụwa niile.” N’ebe ụfọdụ, a hụrụ ọtụtụ ndị nwere mmasị nke mere ka e kwuoro ha okwu ihu ọha.
E Zitekwuru Ndị Ozi Ala Ọzọ, Rụọkwa Alaka Ụlọ Ọrụ Ọhụrụ
Na Septemba afọ 1979, Nwanna Abigail Pérez na nwunye ya Georgina bịara Dọminikan Ripọblik. Ha bụ ndị ozi ala ọzọ. A họpụtara ha ka ha na-arụ ọrụ sekit. N’afọ 1987, e zitere Nwanna Tom Dean na nwunye ya Shirley ka ha bịa nye aka mee ka ozi ọma na-aga aga. Ha gụrụ akwụkwọ n’Ụlọ Akwụkwọ Gilied. Ndị ozi oge niile pụrụ iche e si Puweto Riko zite nyekwara aka mee ka ozi ọma na-aga aga. N’Ọgọst afọ 1988, e zitere Nwanna Reiner Thompson na nwunye ya Jeanne na Dọminikan Ripọblik. Nke a bụ ebe nke ise a na-eziga ha ịga zie ozi ọma.
N’afọ 1989, ndị nkwusa na-eje ozi ọma kwa ọnwa ruru puku iri na otu na iri asatọ na otu. Ndị a na-amụkwara Baịbụl dị puku iri abụọ, narị anọ na iri itoolu na anọ. Nke a gosiri na ọtụtụ ndị ka ga-abata n’ọgbakọ. Ma, otú a ọtụtụ ndị si na-abata n’ọgbakọ ga-efu anyị ihe. Dị ka ihe atụ, anyị anọrọla n’alaka ụlọ ọrụ anyị nwere enwe jee ozi ọtụtụ afọ, ma n’agbata afọ 1987 na afọ 1989, ebe ahụ anaghịzi aba anyị. Nwanna Reiner Thompson sịrị: “Anyị gara chọtakwuo ụlọ n’ebe dị iche iche n’ihi na anyị ehiela nne.”
Nwanna Reiner sịkwara: “O siiri anyị ike ịchọta ebe ga-adị mma ịrụ alaka ụlọ ọrụ. Mgbe otu nwoke nụrụ na anyị na-achọ ala, ọ kpọtụụrụ anyị. O kwuru na o nwere ala ọ chọrọ ire ere, ma ọ bụ naanị Ndịàmà Jehova ka ọ ga-eresị ya. N’oge gara aga, o nwere nnukwu ụlọ ọrụ na-akwa ákwà. Odeakwụkwọ ya na ọtụtụ ndị ọzọ na-arụrụ ya ọrụ bụ Ndịàmà Jehova. O kwuru na ihe Ndịàmà Jehova na-amasị ya n’ihi na ọtụtụ afọ ha rụụrụ ya ọrụ, ọ chọpụtara na ha na-akwụwa aka ọtọ, na-akwanyekwara ndị mmadụ ùgwù. Ebe ọ bụ na nwoke ahụ ejighị Ndịàmà Jehova egwu egwu, o sepụụrụ ha nnukwu ego n’ego ole ọ chọrọ ire ala ya.” Anyị zụrụ ya na Disemba afọ 1988, mechaakwa zụọ ala atọ dị n’akụkụ ya. Ala niile a zụrụ e ji rụọ alaka ụlọ ọrụ na Ụlọ Mgbakọ dị ihe dị ka eka iri abụọ na abụọ.
Ọtụtụ ụmụnna anyị ndị Dọminikan Ripọblik na ndị nke si mba ọzọ bịa wepụtara onwe ha nye aka rụọ alaka ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ na Ụlọ Mgbakọ ahụ. E nyefere ha Jehova na Nọvemba afọ 1996. Mmadụ atọ so n’Òtù Na-achị Isi bịakwara ya. Aha ha bụ Carey Barber, Theodore Jaracz, na Gerrit Lösch. Ha kwuchara okwu na Satọdee mgbe a na-enyefe Jehova ụlọ ndị ahụ. N’echi ya, e nwere nnọkọ pụrụ iche n’ámá egwuregwu abụọ kachanụ na Dọminikan Ripọblik. Ihe karịrị puku mmadụ iri bịakwara legharịa anya n’alaka ụlọ ọrụ ọhụrụ a.
‘Ha Gafetara na Masedonia’
A kọwa akụkọ Ndịàmà Jehova nọ na Dọminikan Ripọblik, a ga-akọtarịrị akụkọ ọtụtụ ụmụnna anyị si mba ọzọ bịa izi ozi ọma ná mba a n’ebe a chọkwuru ndị nkwusa. Ihe mere ha ji bịa malite n’ihe dị ka afọ 1987 bụ na ha nụrụ na otu onye nwere ike inwe ọtụtụ ndị ọ na-amụrụ Baịbụl nakwa na ndị obodo a chọrọ ndị ga-enyere ha aka ịmụta banyere Chineke. E nwere ike ikwu na ha ‘gafetara na Masedonia.’ (Ọrụ 16:9) Ha kọọrọ ndị ọzọ otú obi si atọ ha ụtọ n’ihi ozi ha na-eje na Dọminikan Ripọblik. Nke a mere na malite n’afọ 1991, ọtụtụ ụmụnna bịakwuru na-ekwusa ozi ọma na Dọminikan Ripọblik.
Ụfọdụ n’ime ha bụ Nwanna Stevan Norager na nwunye ya Miriam. Ha bụ ndị Denmak. Ha nọ na Dọminikan Ripọblik na-eje ozi kemgbe afọ 2001. Tupu ha abịa, Nwanna Nwaanyị Miriam na nwanne ya nwaanyị bịara na Dọminikan Ripọblik jee ozi otu afọ na ọkara. Gịnị mere Nwanna Stevan na nwunye ya ji bịa ebe a ebe ọ bụ na asụsụ na omenala ndị obodo a dị iche na nke ha? Nwanna Nwaanyị Miriam kwuru ihe kpatara ya. Ọ sịrị: “Nne na nna m na nne na nna di m ji ọgbakọ kpọrọ ihe. Ha bụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche mgbe ha bụ okoro na agbọghọ. Mgbe ha mụchara ụmụ, ha ghọkwara ndị ọsụ ụzọ oge niile. Ha na-agwa anyị ka anyị banye n’ozi oge niile ma si otú ahụ jiri obi anyị niile na-ejere Jehova ozi.”
Nwanna Stevan na nwunye ya bụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche kemgbe afọ 2006. Ha enyerela ọtụtụ ndị aka ha abata n’ọgbakọ. Nwanna Stevan sịrị: “Jehova agọziela anyị mmaji kwuru mmaji. Nsogbu ndị na-abịara anyị na ọrịa ndị anyị na-arịa enweghị ihe ha bụ ma e jiri ha tụnyere ihe ndị anyị mụtara na otú obi si atọ anyị ụtọ n’ihi ndị anyị nyeere aka ha amara Jehova ma hụ ya n’anya. Anyị enweela ọtụtụ ndị enyi hụrụ anyị n’anya. Ozi ọma anyị na-ezi na Dọminikan Ripọblik emeela ka anyị dịrị umeala n’obi ma na-enwe ndidi. Anyị na-ekowe akpa anyị ebe aka anyị ga-eru. Nke a emeela ka okwukwe anyị sikwuo ike, meekwa ka anyị na-atụkwasịkwu Jehova obi.”
Ebe Nwanna Nwaanyị Jennifer Joy ji asụsụ ndị ogbi na-ezi mmadụ ozi ọma. O jeela ozi ebe a ihe karịrị afọ iri abụọ
Nwanna Nwaanyị Jennifer Joy bụ otu n’ime ụmụnna nwaanyị na-alụbeghị di gafetara na Dọminikan Ripọblik izi ozi ọma. N’afọ 1992, ọ bịara na nke nwanne mama ya aha ya bụ Edith White. Nwanne mama ya a bụ onye ozi ala ọzọ kemgbe ọtụtụ afọ. Oge ahụ Jennifer nọ na nke ya, ọtụtụ ndị gere ya ntị n’ozi ọma, ya amụọkwara ha ihe. Ọ hụkwara ọtụtụ ụmụnna nwaanyị ndị ọzọ na-alụbeghị di gafetara na Dọminikan Ripọblik na-ezi ozi ọma n’ebe a chọkwuru ndị nkwusa. Jennifer sịrị: “Ihere na-eme m, obi esichaghịkwa m ike. Mana, m kwuru n’obi m, sị, ‘Ebe ha meliri ya, m ga-emelikwa ya.’”
Jennifer chọburu ịnọ naanị otu afọ. Ma, kama ịnọ otu afọ, ọ nọziiri gawa. O jeekwala ozi na Dọminikan Ripọblik ihe karịrị afọ iri abụọ. O nyerela ọtụtụ ndị ọ na-amụrụ Baịbụl aka ha abata n’ọgbakọ. Jennifer nyekwara aka kụziere ndị mmadụ asụsụ ndị ogbi, nyekwa aka mee ka a malite ọgbakọ ndị na-eji asụsụ ndị ogbi amụ ihe. O sokwa hazie ihe a ga na-akụziri ndị na-amụ asụsụ ndị ogbi.
‘Jehova ka na-egboro m mkpa m. N’ihi ya, obi siri m ike na ọ ga-egbokwara m mkpa m n’afọ na-abịa abịa’
Oleekwanụ otú Jennifer si akpa afọ ya? Ọ sịrị: “N’afọ ọ bụla, m na-alaghachi Kanada rụọ ọrụ ọnwa ole na ole lọtakwa. Kemgbe ọtụtụ afọ, arụọla m ọrụ ndị dị ka ise foto, ite ụlọ ágbá, ihicha ọfis, na ịrụ kapet. A kụziekwala m asụsụ Bekee, tapịara ndị mmadụ okwu, kpọgharịakwa ndị bịara ilegharị anya, rụọkwa ọrụ ndị ọzọ.” Nwanna nwaanyị a ji ọnọdụ ya tụnyere nke ndị Izrel oge ochie, mgbe ha nọ n’ala ịkpa. O kwuru, sị: “Ọ bụ okwu niile si n’ọnụ Jehova pụta mere ka ha dị ndụ. Jehova kwuru na ya ga-egboro ha mkpa ha. O mekwara otú ahụ. O nweghị mgbe nri kọrọ ha, uwe ha na akpụkpọ ụkwụ ha akaghịkwa nká. (Diut. 8:3-4) Jehova kwekwara anyị nkwa na ọ ga-egboro anyị mkpa anyị. (Mat. 6:33) Ọ ka na-egboro m mkpa m. N’ihi ya, obi siri m ike na ọ ga-egbokwara m mkpa m n’afọ na-abịa abịa.”
Ihe dị ka otu puku ndị nkwusa esila n’ihe dị ka mba iri atọ bịa kwusaa ozi ọma na Dọminikan Ripọblik. Ebe ụfọdụ ha si bịa bụ: Ọstria, Japan, Poland, Puweto Riko, Rọshịa, Spen, Swidin, Taịwan, nakwa Amerịka. Ha nọkwa n’ọgbakọ ndị na-amụ ihe n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Amerịka, asụsụ Chaịniiz, asụsụ Bekee, asụsụ Heshan Kriol, asụsụ Ịtalian, asụsụ Rọshịan, nakwa asụsụ Spanish. Ha kwuru ụdị ihe Pita onyeozi gwara Jizọs. Pita sịrị ya: “Lee! Anyị hapụrụ ihe niile, anyị anọwokwa na-eso gị.”—Mak 10:28.
Ihe Ubi Hiri Nne.—Mat. 9:37
Ihe dị ka otu puku ụmụnna si ná mba iri atọ bịa na Dọminikan Ripọblik. Ha so ọgbakọ na ìgwè na-asụ asụsụ dị iche iche e nwere n’ebe ahụ na-eje ozi. Ì nwere ike iso otu n’ime ọgbakọ ndị ahụ ma ọ bụ ìgwè ndị ahụ na-eje ozi?